The Trip Tareen First Ever Made In Italy | Save A tareenka
Home > safarka Europe > The Trip Tareen First Ever Made In Italy
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 19/09/2020)
Italy ayaa qaar ka mid ah safarada tareen cajiib ah. Waxay leedahay tiro ka mid ah tareenada qurux badan oo saldhigyada fiican dalka oo dhan, laakiin meesha waxaa safar ugu horeysay tareen sameeyay in Italy?
The Trip Tareen First Ever Made in Italy – Bilowga The
The safar tareen ugu horeysay abid ku sameeyey Italy Jidadka tareenka ayaa la soo saaray markii Talyaanigu kala qaybsamay dalka. Waxay qaadatay sano qaar ka mid ah si ay u xiri iyo isku xirka khadadka tareenka hadda jira ka dib markii Italy midoobeen. Khadkii tareenka ee ugu horreeyay ee Talyaanigu dhistay wuxuu ahaa khadka Naples ilaa Portici oo markaas ku yaallay Boqortooyadii Labada Sicilil. line waxa uu ahaa 7.25 kiiloomitir dheer. line The caleemo saaray 3rd October ee 1839. Tani waxa ay ahayd 9 sano ka dib safka ugu horreeya "casriga ah" ah magaalada gudaheeda waxaa la dhisay oo ahaa Liverpool iyo Manchester ee Railway.
track bilowga ahaa track a double iyo waxa ka jooga goobta hadda ee Corso Garibaldi orday ee Naples si Palace Royal ee Portici. Qasriga Boqortooyada joogay cagta ee caanka ah Mount Vesuvius. Dadka horreeyey waxaa la sameeyey safarka tareenka si ay Italy halkan, iyo line this hadda qayb ka khadka tareenka Naples-Salerno.
Naples si Tareenadu Salerno
Florence si Tareenadu Salerno
Rome si ay Tareenadu Salerno
The line tareenka Naples-Salerno waa line a tareenka waaweyn ee network rail Talyaani maanta oo waxay leedahay meel Safarka Koowaad ee Tareenka lagu Sameeyo Talyaani. Waxa ay qaab link a ee khadka jirridda ugu weyn koonfurta Italy. kiiloomitir horeysay line ayaa safka ugu horreeya tareenka. Dadka hadda isticmaasho tareen si ay mid ka mid ah ugu Meelaha si fiican u yaqaan, magaalo xeebeed caan ah oo la yiraahdo Amalfi oo ku taal gobolka Campania. Waa magaalo cajiib ah xeebaha. Waa ammaan in la yidhaahdo in safarka tareenka oo ay halkaas ka heli xeebaha waa isku wada mid ah. Ka fikir biyaha crystal, ciid cad oo Ereyada xaqse gudaha iyo mida qaar ka mid ah naqshadda dhismaha cusub iyo kii hore u qurux badan. Waxaad noqon doontaa marka aad u soo curiyo aad safar tareen ka Naples si Salerno, halkaas oo aad ka dibna baska ama hab kale ee abaabulan ee gaadiidka galay Amalfi qabsan doonaan,.
Sidaas waxa ku dhacay the line Naples-Portici? The Kuliyada Beeraha oo ka mid ah Jaamacadda ee Naples Federico II waa user ugu weyn ee line this sabab u fududahay in Mount Vesuvius ay helaan. wadada safarka tareenka ugu horeysay ee Italy ayaa weli ka jira maanta.
Khadadka tareenka ee ugu horreeya ee Talyaaniga ayaa jidka dhigay mustaqbalka safarka tareenka dalka. Qaar ka mid ah u socdaalay tareenka ugu quruxda badan halkan waa. Gadaal u safar ugu horeysay tareen sameeyay ee Italy, aan u hubino in inkastoo wax badan ayaa isbedelay. muuqaal ayaa ku hadhay sidii captivating ka dibna sida ay hadda tahay.
Marka hadda oo aad wax ka baratay safarka tareenka ee ugu Horeeyay ee weligi lagu Sameeyay Talyaaniga, ma waxaad ka fakaraysaa Tayaasha A Tareen Ticket safarka tareenka Yurub? Waa maxay sababta aan qaadan 3 daqiiqo on our site in la helo tikidhada jaban ee dariiqyada aad. Soo gal goobta hadda Tareenadu Book.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/the-first-train-trip-ever-made-in-italy/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Cudarada ah.
tareen safarka safarka tareenka travelitaly
Tareenka Safarka Belgium, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, Tareen Travel The Netherlands, safarka Europe
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, Tareen Travel The Netherlands, safarka Europe